वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : November 2010
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ November 26, 2010
नोभेम्बरको ११ को टूरका लागि बस चढ्ने बेला थाहा भयो, हामी जम्मा तीनजना रहेछौं संगै यात्रा गर्ने। बाँकी दुई सदस्यहरु पनि कन्फरेन्सकै सहभागी थिए-एकजना कोरीयाली प्राध्यापक र उनकै सुपरिवेक्षणमा पीएचडी अध्ययनरत एक विद्यार्थी। गाईडका अनुसार यतिखेर सिआनको पर्यटकीय मौसम सकिईसकेको रहेछ, त्यसैले १५ जना जति अट्ने यो सानो बसका सहभागीहरु यति थोरै भएका रहेछन्। प्राध्यापक ली बोलेको बोल्यै गर्ने खालका थिए, हाम्रो बिचमा पेशागत र अरु थुप्रै कुराहरु भए। एकाअर्काका देशका बारेमा धेरै नयाँ जानकारीहरु पनि साट्यौं हामीले। उनका विद्यार्थी भने एकदमै कम बोल्थे। उनको अंग्रेजी पनि त्यति राम्रो रहेनछ कि किन हो, प्राध्यापक ली बेला-बेलामा हाम्रो कुराकानी उनलाई कोरीयाली भाषामा सुनाईरहेका हुन्थे।
हाम्रो दोश्रो गन्तब्य पान्फो संग्रहालय (Xian Banpo Museum) थियो। सन् १९५३मा उत्खनन् गरिएको यो क्षेत्र ६००० वर्ष पहिलाको कुनै मानव बस्तीको अवशेष रहेछ। भग्नावशेषमा एउटा सानो गाऊँ, ग्राम प्रमुख र अरुका घरहरु, माटाका भाँडाहरु बनाउने ठाऊँ, पूजा गर्ने ठाऊँ, बलि दिईने मौलो, चिहानहरु र बाहीरी आक्रमणबाट बस्तीको सुरक्षाका लागि बस्तीको वरिपरि बनाईएको गहिरो जलाशय (Moat) आदि प्रष्टसंग ठम्याउन सकिने रहेछ। त्यो समयका मानव अवशेषहरु पनि धेरै छन् त्यहाँ। गाईडका अनुसार अवशेषहरुको अध्ययनबाट थाहा भए अनुसार त्यो बस्तीका मानवहरुको शारीरिक बनावट र अन्य आनुवांशिक विशेषताहरु आधुनिक चिनियाँहरुसंग मिल्दैन रे। त्यो बस्ती र त्यहाँका बासिन्दाहरुको बारेमा अझै धेरै कुरा जान्न सकिएको रहेनछ। भग्नावशेष गाऊँको एक भाग
बस्तीको एउटा औसत घरको आधारभूत संरचना-भग्नावशेषको आधारमा अनुमान गरिएको चीरनिद्रामा ६ हजार वर्ष पुरानो जोडी। दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने कतिपय भाँडाकुँडा पनि संगै गाड्ने चलन रहेछ।
यो टेराकोटा सेना ईशापूर्व २१० तिरको संरचना मानिँदो रहेछ। उत्खनन् हुनेबित्तिकै यहाँका मूर्तिहरुमा ओहदा जनाउने प्रयोजनका बिभिन्न रंगहरु देखिन्थे रे तर वर्षौंको प्रदूषण, क्यामराहरुको फ्ल्याश आदिले गर्दा सम्पूर्ण रंग नष्ट भएछ। यतिखेर संरचनाहरु धूलोले ढाकिएका कालीमाटीका मूर्तिजस्ता मात्रै देखिन्छन्। उत्खनन् हुन बाँकी रहेकालाई भने यस्तो हुन नदिन उत्खननकर्ताहरु सचेत छन् रे अहिले। उत्खनन् क्षेत्रको वरिपरिको भागलाई शहरको रुपमा विकास गरिँदै रहेछ। नजिकै एउटा चिडियाखाना पनि बन्दै थियो। यस्तो क्षेत्रलाई पनि असीमित ढंगले ब्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको देख्दा राम्रो लागेन। यो क्षेत्रलाई सकेसम्म प्राकृतिक रुपमा छोडे राम्रो हुन्थ्यो। प्राध्यापक लीको विचार पनि यस्तै रहेछ। मृत सम्राटका लागि सेना
टेराकोटा सेनाको संग्रहालय जानु अगाडि बाटैमा पर्ने आधुनिक टेराकोटा कारखाना लागिँदो रहेछ सबैलाई। यहाँ सकेसम्म टेराकोटा सेना बनेकै समयको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर टेराकोटा मूर्तिहरु बनाईँदो रहेछ र पर्यटकहरुलाई बेचिँदो रहेछ। यहाँ भने स-साना दुई मूर्तिहरु किनें मैले पनि। कारखानाभित्र।भाग १ भाग २ भाग ४ (क्रमश:)
यहि भाषामाथिको 'गुमेको' पकडका कारण मैले ७ नोभेम्बरको 'फुर्सदिलो' दिन होटलको नजिकै हल्लेर मात्रै बिताएँ, स्थानीय बस चढेर कुनै पर्यटकीय स्थल जाने मन थियो तर आँट आएन। केहि दिन चिनियाँ भाषाको bombardment मा बसिसकेकाले ११ का दिन भने अन्त्यमा मैले बसै चढ्ने आँट गरेको थिएँ:) जुन लाईनको बस मैले समातेको थिएँ, त्यो लाईनका बसमा बस-कार्डमात्रै चल्ने भनेर लेखिएको पढेको थिएँ बस-बिसौनीमा, तर पैसा तिरेर पनि भईहाल्ला नि भनेर चढें म। हातमा ५ युआनको नोट लिएर चालकलाई देखाऊँदै 'यसले हुन्छ कि हुँदैन?' भनेर सोध्न आँट्दै थिएँ, चालकले पहिला हातको ईशाराले 'हुँदैन!' भने, फेरि लगत्तै 'चढ्! चढ्!' भनेर ईशारा गरे। यसरी म साढे दुई युआनको बस भाडा तिर्नै नपरी City Wall पुगें:)
सियान चिनका प्राचीन राजधानी शहरहरुमध्ये एक हो, जसको बारेमा यहाँ केहि पढ्न सक्नुहुन्छ। City Wall राजपरिवार र अरु सम्भ्रान्तहरु बस्ने क्षेत्रलाई आक्रमणकारीहरुबाट जोगाउन निर्माण गरिएको थियो। Great Wall पूरै चीनको सुरक्षाका लागि थियो भने City Wall सियानको शहरी सम्भ्रान्त वर्गको सुरक्षाका लागि। सियानको पहिलो City Wall को निर्माण कार्य १९४ ईशापू्र्वमै शुरु गरिएको थियो र चार वर्षमा सम्पन्न भएको थियो। त्यो आयताकार पर्खाल २५.७ किमी लामो र १२-१६ मीटर चौडा थियो र यसले लगभग ३६ वर्ग किमीको क्षेत्रफललाई घेरेको थियो। यसपछि पनि बिभिन्न city wall हरु निर्माण भएका रहेछन्। हाल सग्लो अस्तित्वमा रहेको city wall को निर्माण कार्य भने मिङ वंशको शाशनकालमा सन् १३७० मा शुरु भएको रहेछ। यो पर्खालले १४ वर्ग किमीको क्षेत्रफललाई घेरेको छ, यसको परिधि १३.७ किमी, उचाई १२ मीटर र चौडाइ १६-१८ मीटर रहेको छ। City Wall मा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय ढोका दक्षिणी ढोका रहेछ। भित्र पसेर एकछिन हिँडेपछि भाडाको साईकल लिएँ, १०० मिनेटका लागि २० युआन लाग्ने रहेछ। City Wall को फराकिलो तालुमा साईकल कुदाऊँदा एकछिन त मजै भयो तर एक्लै भएकाले चाँडैनै दिक्क लाग्यो। डेढघण्टा जतिमा Wall पूरै फन्को लगाउन सकिन्थ्यो होला, तर म आएकै बाटो फर्किएँ र साईकल बुझाईदिएँ। तल Xian City Wall बाट केहि तस्बीरहरु;
City Wall बाट झरेर 'भित्री शहर' मै एकछिन रंगबंगिने क्रममा 'प्रवेश निषेध' लेखिएको एउटा मन्दिर/अध्ययन केन्द्र देखियो। चिनियाँहरुको बाक्लो ओहोरदोहर देखेकाले त्यो 'प्रवेश निषेध' को खासै अर्थ छैन होला भनेर पस्ने खोजेको, चौकिदारहरुले पस्न दिएनन्। विदेशीहरुका लागिमात्रै प्रवेश निषेध भएकाले कुनै संवेदनशील स्थल हुनुपर्छ। अथवा त्यससंग संबन्धित बाहेकका चिनियाँहरुका लागिनै पनि प्रवेश निषेध हुन पनि सक्छ। होटल फर्केर आऊँदा भने कार्ड नचल्ने, बसभाडा नगदनै तिर्नुपर्ने रुटको बस खोजेर आएँ, र पैसा तिरेरै आएँ:) भाग १ भाग ३ भाग ४ (क्रमश:)
ब्लगमा अनुपश्थित भएको दश दिन भईसकेछ। यसपटकको अनुपश्थिति ब्लग लेख्नै नभ्याउने गरी एकदमै ब्यस्त भएर भने होईन। नोभेम्बर ६ देखि १२ सम्म म चीनको सियान (Xian) शहरमा थिएँ। चीनमा यतिखेर ब्लगर, फेसबुक र युट्युब सबै प्रतिबन्धित रहेछन्। प्रोक्सीको सहायताले गरिएको खोल्ने कोशिश पनि काम लागेन। अलिक धेरै समय दिन पनि सकिएन चिनियाँ सरकारको आँखा अझै नपरीसकेको प्रोक्सी खोज्न। ब्लग, फेसबुक र युट्युब तिन्टै चलाउन नपाएपछि त ईण्टरनेट भन्ने चिजै किन चाहियो र जस्तो पो लाग्दो रहेछ:) चीनमा यी साईटहरु प्रतिबन्धित भईरहन्छन् भनेर थाहा नभएको पनि होईन पहिला, तर हिँड्ने बेलामा दिमागमा त्यो कुरा आऊँदै-आएन। उल्टो म त "चीन छऊञ्जेल दिनदिनै ब्लग लेख्छु!" भन्ने 'जोगी-कल्पनामा पो मस्त थिएँ:) म सियानमा Asian Conference on Electrical Discharge (ACED) नाम गरेको एउटा कन्फरेन्समा भाग लिन पुगेको थिएँ। ACED 2010, हरेक दुई वर्षमा आयोजना गरिने ACED को पन्ध्रौं संस्करण हो। High Voltage Engineering, Dielectric Science, Insulation Diagnosis जस्ता विषयहरुमा केन्द्रित हुने ACED मा मूलत: यी विषयमा काम गरीरहेका एशिया क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरु, अनुसन्धान-संस्थाहरु र औद्योगिक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ। ACED, High Voltage Engineering विषयका प्रमुख एशियाली कन्फरेन्सहरुमध्ये एक मानिन्छ। जापान छँदा गरेका कामहरु समेटिएका दुई पेपरहरु प्रस्तुत गर्नु थियो मलाई।
ACED अहिलेसम्म जापान, चीन, सिंगापुर, कोरीया, ईण्डोनेशिया, थाईल्याण्डमा आयोजन भईसकेको छ, आगामी संस्करण २०१२ मा मलेशियामा हुँदैछ। कार्यक्रममा सहभागिता पनि तिनै देशहरुबाट धेरै थियो। ती देशहरु यतिखेर सम्पन्नता र विकासतिरका सहयात्री हुन्। यतिखेर शायद सबैभन्दा धेरै engineering र निर्माण कार्यहरु तिनै देशहरुमा भईरहेका छन्। तिब्र गतिको विकासलाई साथ दिन इलेक्ट्रिकल प्रणाली र उद्योगहरुको विकास पनि तिब्र गतिमै भईरहेको छ यि देशमा। तिब्र विकाससंग जहिलेपनि गतिशील अनुसन्धान-संस्कृति जोडिएर आउँछ। आफ्नो भिमकाय आकार र सामरिक शक्तिका कारण भिन्दै खाले राजनीतिले गर्दा बढी चर्चा चीनको हुन्छ तर यतिखेर समृद्धिकी देवी चीनमा मात्रै होईन समग्र पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एशियालाईनै उजिल्याउने क्रममा छिन्। ACED को सहभागिताले पनि यस्तै संकेत गर्छ शायद। माथि उल्लेख गरिएका सबैजसो देशहरुको आधुनिकता र सम्पन्नतातिरको यात्रा हामीसंगै शुरु भएको हो। यतिखेर उनीहरु कहाँ पुगिसके र हामी कहाँ छौं; तुलना गर्न पनि नसकिने भईसक्यो। दशकौंदेखिको गलत र अकर्मण्य राजनीति र सांस्कृतिक/सामाजिक चिन्तनका कारण हामी झन् पछाडि र झन् पछाडि हुँदै गईरहेका छौं। एशियातिर प्रवेश गरेको सम्पन्नताको यति ठूलो लहरले पनि हामीलाई छोएन भने, यतिखेर पनि हामीले आफूलाई विकसित र सम्पन्न बनाउन सकेनौं भने हाम्रोलागि कहिल्यै अवसर आउने छैन शायद।
भाग २ भाग ३ भाग ४ (क्रमश:)
लामो समयदेखि प्रतिक्षित ब्लगर भेला आज सम्पन्न भयो। नेपाली ब्लग जगतले केहि वर्ष लामो बाटो तय गरिसकेको छ। नेपाली ब्लग जगत संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै हिसाबले समृद्ध पनि हुँदै गईरहेको छ। नेपाल भित्र र बाहिरबाट नेपाली, अंग्रेजी र अरु बिभिन्न भाषाहरुमा धेरै ब्लगहरु नियमित रुपमा सञ्चालित भईरहेका छन्। नेपाली ब्लग जगतको आगामी बाटो सकारात्मक संकेतहरुले भरिएको देखिन्छ, तर हामी सन्तुष्ट भएर नीच मारेर बस्ने स्थितिमा भने कदापि पनि छैनौं।
ब्लगकर्म आफैं एउटा अनलाईन गतिबिधि भएकाले ब्लगजगतमा आफ्नै खाले अन्तर्कृया र सम्वाद निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। ब्लगपोष्ट र प्रतिकृयाका माध्यमबाट विचार आदानप्रदान र छलफल चलिरहेका हुन्छन्। अहिले आएर फेसबुक र ट्विटरजस्ता सामाजिक संजालका माध्यमबाट पनि ब्लगरहरु अन्तर्कृयारत छन्। ब्लग र सामाजिक संजालको संयोजनले एउटा नयाँ संचार-संस्कृतिलाई जन्म दिँदै गरेको भान हुन्छ। ब्लग र सामाजिक संजालको मात्रै भर पर्दा सम्वाद पूर्ण नहुन सक्छ। ब्लगरहरुका अनुभव साट्न, कुनै विषयविशेषमा छलफल गर्न भने औपचारिक भेलाहरुकै जरुरत पर्नसक्छ, यो नै बढी प्रभावी हुनसक्छ। 'दौंतरी' ले संसारभरि रहेका नेपाली ब्लगरहरुबीच अनलाईन भेला गर्दै आईरहेको छ केहि समय यता। तर नेपाली ब्लगरहरुबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट र अन्तर्कृया भने त्यति धेरै भएको छैन। निकट भूगोलमा बस्ने ब्लगरहरुबीच प्रत्यक्ष भेला सहजै सम्भव पनि हुन्छन्। काठमाण्डौंमा विगतमा हुने गरेका यस्तै प्रत्यक्ष भेटघाट, भेलाको क्रम टुटेको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भईसकेको थियो। यिनै पृष्ठभूमिमा आजको यो ब्लगर भेलाको परिकल्पना गरिएको थियो।
कार्यक्रमको शुरुवाती परिकल्पना यसलाई अनौपचारिक राख्ने र प्रत्यक्ष चिनजान र केहि भलाकुसारीका माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने थियो। सहभागी संख्या पनि त्यति धेरै अनुमान गरिएको थिएन। यस बारेमा Event बनाएर फेसबुकमा राख्दा र धेरै साथीहरुलाई सहभागिताको लागि निम्तो पठाईसक्दा पनि सम्भाव्य सहभागिता कमै देखिन्थ्यो। आज बिहानसम्म फेसबुकमा सहभागिता निश्चित गर्ने साथीहरुको संख्या ४४ पुगेको थियो, यो आधारमा हामीले कम्तिमा २५ जनाभने पक्का सहभागी हुने अनुमान गरेका थियौं। कार्यक्रम क्यापिटल एफएमको प्रशिक्षण कक्षमा भएको थियो र सहभागी संख्या थियो २०। छोटो समयको तयारी र सूचनाको आधारमा भएको यो सहभागितालाई उत्साहजनकनै मान्नुपर्छ।
सहभागी ब्लगरहरु :
कार्यक्रम परिचयको आदानप्रदानबाट शुरु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी साथीहरुमध्ये दुईजनासंगमात्र मेरो प्रत्यक्ष चिनजान थियो। बाँकी सबैसंग आज पहिलोचोटि भेटघाट भएको भएपनि ब्लग र फेसबुकको सम्बन्धका कारण चीरपरिचितझैं लाग्नुभएको थियो:) कार्यक्रममा नेपाली ब्लगजगतको वर्तमान स्थिति र समस्याहरुका बारेमा छलफल भएको थियो। हालै, अश्लील साईटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको एउटा निर्णयमा आधारित भएर केहि इण्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ब्लगस्पट डोमेनलाईनै ब्लक गरेको घटनामाथि विशेष चर्चा भएको थियो। यस्तो स्थिति फेरि दोहोरिएमा, वा ब्लगरहरुलाई अरु बिभिन्न अवरोध र समस्याहरु आईलागेको बेलामा एकीकृत र सशक्त ब्लगर आवाज कसरी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि साथीहरुले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। सबै धारणाहरुको सारको रुपमा, ब्लगरहरुको आपसी संजाललाई इमेल समूहजस्ता संरचनाका माध्यमबाट नियमित राख्ने र कुनै समस्या र अवरोध आईपर्दा सम्पूर्ण ब्लग जगतले एउटै आवाज उठाउने बानी बसाल्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरियो। देशको तरल राजनीतिक परिश्थितिका कारण कुनैपनि बेला अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कैंची चल्नसक्ने सम्भावना टड्कारो छ। त्यो स्थितिमा केहि ब्लगरहरु वा पूरै ब्लग जगतमाथि वैचारिक/भौतिक दबाब पर्नसक्छ। यसैले आवश्यक पर्दा तुरुन्त आन्दोलित हुन सक्ने गरी ब्लगजगत संगठित हुनुपर्छ। यो 'संगठित' हुने कामका लागि एउटा खुकुलो तर नियमित संरचना पर्याप्त हुन्छ, कुनै 'औपचारिक' र 'दर्तावाल' संगठनको आवश्यकता छैन। मुख्य कुरो, सामान्य स्थितिमा आफ्नै हिसाबले ब्लगलेखनलाई निरन्तरता दिने तर आवश्यकता पर्दा सबै एकै भएर लाग्ने गरी हामी ब्लगरहरुले आफैंलाई दिक्षित गर्ने, आत्मानुशाशित पार्ने हो। सामाजिक मानसिकतामा नेपाली ब्लगजगतलाई सशक्त रुपले स्थापित गर्नका लागि मूलधारका संचारमाध्यमहरुबाट लिन सकिने सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको थियो। मूलधारका मिडियामा कार्यरत केहि साथीहरुनै सकृय ब्लगरपनि रहनुभएकाले उहाँहरुले केहि बाटो निकाल्नुहुनेछ भन्न्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं। साथै, भेलामा विगतका भेलाहरुमा गरिएका छलफलहरुको बारेमा पनि चर्चा गरिएको थियो।
यस्ता ब्लगर भेला नियमित गर्नुपर्ने कुरामा सबैको सहमति रहेको थियो। यसै क्रममा अर्को ब्लगर भेला आजको भन्दा वृहद् र योजनाबद्ध रुपमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। उक्त भेला आगामी पुस ३ गते शनिवार सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ।
आजको भेलाका सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई हार्दिक धन्यबाद! र कार्यक्रमस्थलको ब्यबश्थाका लागि गर्नुभएको प्रयासका लागि रुपेशजीलाई विशेष धन्यबाद!
ब्लगर भेलाका सहभागीहरु
ब्लगर भेलाका बारेमा आज सहभागी सबै साथीहरुबाट पनि लेखिनेनै छ, नेपाली ब्लगहरु हेर्दै गर्नुहोला।----------------अन्त्यमा, यहाँहरु सबैमा तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरुको जीवन उज्यालो र समृद्ध रहिरहोस् सधैंभरी।